Excel Solutions Archives - Data Recovery Blog
Home Solutions Vahaolana amin'ny birao Vahaolana Excel
Fomba 2 hanangonana batch hanovana ny endrik'ireo fanehoan-kevitra rehetra ao amin'ny boky fiasana Excel
Fanarenana rakitra Excel, Vahaolana Excel Jona 11, 2018
Aorian'ny fampidirana fanehoan-kevitra maro ao amin'ny boky fiasana Excel dia azonao atao ny manamboatra ny endritsoratra amin'ny fanehoan-kevitra rehetra. Amin'ity toe-javatra ity dia azonao atao ny manondro an'ity lahatsoratra ity. Hizara fomba mora 2 izahay eto. Araka ny hitantsika, ireo hevitra napetraka ao amin'ny Excel dia mampiasa ny endri-tsoratra default. Indraindray ianao dia mety te hanova ny endritsoratra ao amin'ilay hevitra. Raha misy hevitra vitsivitsy dia azonao atao ny mampiasa ity fomba 1 manaraka ity hanovana azy ireo amin'ny tanana. Na izany aza, raha misy hevitra an-jatony, dia tsara kokoa ianao ...
Fomba 2 hanodinana ny sanganasa rehetra avy amin'ny takelaka misy rehetra ka hatrany amina endrika vaovao noforonina ao amin'ny Excel Workbook
Fanarenana rakitra Excel, Vahaolana Excel Jona 8, 2018
Raha misy takelaka maromaro ao amin'ny boky fiasana Excel misy tabilao maro ary ankehitriny te-hamindra ny tabilao amin'ny takelaka noforonina vaovao ianao, azonao atao ny mijery ity post. Eto izahay dia hampahafantatra anao fomba mora 2. Aorian'ny famoronana tabilao ho an'ny angon-drakitra isaky ny worksheet an'ny workbook Excel, mba hahafahana mamakafaka kokoa ny angon-drakitra mifanaraka amin'ireo tabilao ireo dia azonao atao ny manangona ireo tabilao rehetra ireo amin'ny takelaka iray. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mety manantena ianao ny hamindra azy rehetra amin'ny takelaka vaovao. Raha vitsy ny tabilao, ianao ...
Fomba mora 3 hametahana ireo rohy hyperlink marobe ao amin'ny Excel
Fanarenana rakitra Excel, Vahaolana Excel Jona 7, 2018
Raha te-hanokatra hyperlink marobe ao Excel ianao dia azonao atao ny mijery an'ity lahatsoratra ity. Eto izahay dia hampahafantatra anao fomba mora ampiasaina 3. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy. Azonao atao ny misafidy izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Amin'ny tranga sasany, rehefa mijery rakitra Excel misy hyperlink be dia be ianao, dia azonao atao ny manokatra hyperlink marobe. Raha rohy telo na maromaro ihany no hosokafana dia azonao atao ny mampiasa ny fomba 1 etsy ambany. Na izany aza, raha te hanokatra ny rohy rehetra ao amin'ny faritra tadiavinao ianao dia azonao ampiasaina ...
Page 1 ny 11812345Manaraka >Last »